Ụgbọ elu na -aga Iraq, Spain, Kenya, Slovakia na -amalite site na Russia ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Russia » Ụgbọ elu na -aga Iraq, Spain, Kenya, Slovakia na -amalite site na Russia ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Iraq na -agbasa akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Akụkọ kacha ọhụrụ na Slovakia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Iwu a machibidoro ịbanye na Russian Federation nke ụmụ amaala mba ọzọ na ndị na -enweghị nwa amaala n'ihi ọrịa coronavirus. Akwụkwọ agbakwunyere na -ekpebi ndepụta mba, site na nke ụmụ amaala nwere ike banye na Russia site na ntinye ikuku.
Rọshịa na -agbasawanye ndepụta mba, site na nke a ga -enyekwa ụmụ amaala ohere ọzọ ịbanye na Russia site na ikuku.
Iraq, Spain, Kenya, Slovakia agbakwunyere na ndepụta mba Russia maliteghachiri ọrụ ikuku.
Akwụsịla ụgbọ elu Russia na -aga Tanzania n'ihi ọnọdụ ọrịa na mba ahụ ruo Ọktoba 1.
N'ime iwu kabinet wepụtara na Portal nke ozi iwu, ndị ọrụ gọọmentị Russia ekwuputala mmụba nke ndepụta mba, nke a ga -enyekwa ụmụ amaala ọzọ ohere ịbanye na Russia site na njem ụgbọ elu.
Mba anọ gbasaa ndepụta a ma ugbu a gụnyere Iraq, Spain, Kenya na Slovakia.
Edeberela akwụkwọ mgbakwunye na iwu gọọmentị edepụtara na Machị 16, 2020 site na ọnọdụ ndị a: “Iraq, Spain, Kenya, Slovakia. ” Iwu ahụ na -amachibido ịbanye na Russian Federation nke ụmụ amaala mba ọzọ na ndị na -enweghị ụmụ amaala n'ihi ọrịa coronavirus. Akwụkwọ agbakwunyere na -ekpebi ndepụta mba, site na nke ụmụ amaala nwere ike banye na Russia site na ntinye ikuku.
Ebinyere aka n'akwụkwọ ọhụrụ ahụ na Septemba 21, 2021. Ebe nsogbu mgbochi mgbochi coronavirus kọrọ na mbido ụbọchị ahụ, Russia maliteghachiri ọrụ ikuku na Iraq, Spain, Kenya na Slovakia, yana bulie mmachi niile na ọrụ ikuku na Belarus.
Na mbu, Moscow emepegharịrị ụgbọ elu na mba 53. Ka ọ dị ugbu a, agbatịla ụgbọ elu na Tanzania n'ihi ọnọdụ ọrịa na mba ahụ ka Ọktoba 1 dị.